होशमा आउँदा मेरो सारा अनुहारभरी टाँ,का लगाएको थियो – live 60media
बीबीसी – दश हप्ताभन्दा लामो समयको पी’डापछि जार्काले आशाको एउटा किरण देखिन्। “म खुसी छु। मेरो नाक फेरि बन्यो‘” उनको अनुहार फेरि राम्रो देखिने बनाउने शल्यक्रिया गरिएपछि उनले चिकित्सकहरूलाई भनिन्। हातमा बोकेको ऐनामा उनले टाँ’का र र’गतका टाटाले ढाकेको नाक देखिन्।
अफगानिस्तानमा महिलाविरुद्ध व्यापक रूपमा घरेलु हिं सा हुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उद्धरण गरेको एउटा राष्ट्रिय सर्वेक्षणमा ८७५ महिलाले कुनै न कुनै रूपमा शारीरिक, यौ निक वा मानसिक घरेलु हिं सा भोगेका हुन्छन्। पति वा परिवारका पुरुष सदस्यले कहिलेकाहीँ महिलामाथि ते जाब वा ह तियार प्र हार पनि गर्छन्। यो घटनामा पतिले जार्कालाई आ क्रमण गरी च क्कुले ना’क का’टिदिएका थिए।
डा। जाल्माइ खान अहमदजाईले निःशुल्क शल्यक्रिया र अन्य उपचार गरिदिए “शल्यक्रियाअघि म नराम्री देखिन्थेँ,” उनले भनिन्। उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू पनि उनको अवस्थामा देखिएको सुधारप्रति खुसी छन्। “उनको शल्यक्रिया राम्रोसँग भयो। सङ्क्रमण पनि छैन‘,” डा। जाल्माइ खान अहमदजाईले भने। काबुलबाट झन्डै २५० किलोमिटर दक्षिणमा पाकिस्तानसँगको सीमानजिकै एउटा दुर्गम स्थानमा जार्काको परिवार बस्छ। उनको परिवार धेरै गरिब छ। उनी निरक्षर छिन्।
उनको प्रान्तमा तालिबानको नियन्त्रण छ। स्थानीय नेता र ल’डाकुहरूले समन्वय भएपछि बल्ल उनी उपचार गर्न काबुल जान पाइन्। त्यो बेला डा। जाल्माइलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको थियो। पत्नीको मृत्यु भएकाले ती ४९ वर्षीय चिकित्सक उनको अन्तिम संस्कार गरेर भर्खर काबुल फर्किएका थिए। “आउँदा उनको स्थिति नराम्रो थियो। उनको नाक नराम्ररी सङ्क्रमित थियो,” उनी भन्छन्।
जार्काको माइती पक्ष उनका पतिलाई दण्ड दिन चाहन्थ्यो जार्काको उपचार स्थानीय स्तरमा पर्याप्त थिएन। उनलाई अनुहार पुनर्निर्माण गर्ने शल्यक्रियाको आवश्यक थियो। र’क्ताम्मे अनुहार देखिने उनको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिएको थियो। डा। जाल्माइले पनि त्यो देखे।उनले निःशुल्क उपचार गरिदिने घोषणा गरे। स्थानीय अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गरेर उनले जार्कालाई काबुल आउने प्रबन्ध मिलाइदिए।
डा। जाल्माइ अहिले जार्काको स्वास्थ्यमा भएको प्रगतिको निगरानी गरिहेका छन्। आवश्यक पर्‍यो भने लेजर विधिबाट थप उपचार गर्न वा सिलिकन इम्प्लान्ट गरिदिने विचारमा उनी छन्। सामान्यतया अहिले गरिएको उपचारको उनी २००० अमेरिकी डलर शुल्क लिन्थे। जार्काले त्यो रकम तिर्नुपरेन।
← उखुको पैसा नदिएर किसान रुवाउनेलाई तत्काल ठेगान लगाउन पार्टीका नेतालाई विप्लवको आदेश !
चोखो मनले ९ लाख बति बालेको फोटोलाई छोएर ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस सारा दुख पाप काटिनेछ ॐ ॐ ॐ !!!t →